हिसी मैचा कबिशा भन्छिन “डन्ट बे्रक माइ हर्ट” – Namaste Filmy
कबिशा श्रेष्ठ प्राकृति सुन्दरता, सांस्कृतिक र धार्मिक स्थल समेतबाट परिचित जिल्ला दोलखाबाट काठमाण्डौं आइकी हुन । काठमाण्डौं आउनुमा अन्य धेरै नेपाली चेलीहरुमा झैं उहाँमा पनि एउटा दृढ अठोट रहेको छ । त्यो हो मोडलिङ्गको दूनियाँमा रम्ने अनि रमाउनुका साथसाथै मनोरन्जन प्रदान गर्नु हो । शारिरीक रुपमा आकर्षकका साथै सुन्दरताले भरिएकी कबिशालाई नजिकका साथीहरुले हिसी मैचा भनेर सम्बोधन गर्ने गर्दा रहेछन । यतिखेर उनले दुइवटा म्यूजिक भिडियोमा आफ्नो सुन्दरता, क्षमता र प्रतिभा प्रस्तुत गरिसकेकी छिन भने एक चलचित्रमा समेत अनुबन्धित भइसकेकी छिन । यी नै बिछट्टै राम्री मोडल कबिशा श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको केहि अंश प्रस्तुत गरिएको छ ः
प्रश्न ः मोडलिङ्गको रुचि चाहिँ कहिले देखि बढ्ेको हो ?
उत्तर ः मलाई सानै उमेर देखि नयाँ र स्टाइल स्टाइलको लुगाहरु लगाउन मन लाग्थ्यो । मेरो यो स्वभाव देखेर घर परिवार र साथीहरुले पनि मलाई ठूलो भए पछि मोडल बन्ने बिचार छ की के हो भन्ने गर्दथे । त्यसको पनि बिस्तार प्रभाव पर्दै गयो । वास्तवमा अहिले रुचि पनि मोडलिङ्ग तर्फ आकर्षित हुन पुगेको छ ।
प्रश्न ः तपाईलाई त मोडल मात्र होइन, फ्यानहरुले त साह्रै नै “हिसी मैचा” भन्दा रहेछन नी ?
उत्तर ः हाहाहा…. १ साथीभाई अनि फ्यानहरुलाई राम्रो लागेर त्यसो भन्नु भएको होला । मलाई “हिसी मैचा” भनेर सम्बोधन गर्ने मेरा शुभचिन्तकहरुलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
प्रश्न ः साँच्चै तपाई त विछट्टै राम्री पो हुनु हन्छ १ तपाई आफुले आफुलाई चाँहि कत्तिको राम्री छु भन्ने ठान्नु हुन्छ ?
उत्तर ः आफुले आफैलाई सकेसम्म नराम्रो छु त कसले भन्छ र १ मलाई आफन्त, साथीभाईहरुले मोडल बन्न लायककी छे भनेर नै उत्प्रेरित गर्दै आइरहेको कारण पनि आज म यस क्षेत्रमा पाइला अगाडि बढाइरहेको छु । तर म आफुले आफुलाई राम्री छु भनेर भन्दा पनि म नराम्री चाँहि छैन है भन्न चाहन्छु ।
प्रश्न ः ग्ल्यामर्सको दुनियाँमा प्रवेश गरेर के के गर्नु भयो त ?
उत्तर ः मैले भरखर म्यूजिक भिडियोबाट आफ्नो क्यारियर प्रारम्भ गरेको छु । मैले दुइवटा म्युजिक भिडियोमा काम गर्ने अवसर पाएकी छु । अरु भिडियोहरुको लागि पनि प्रस्तावहरु आइरहेका छन । मेरो पछिल्लो म्यूजिक भिडियो चाहिँ दिपक लिम्बुको स्वराकंन र सृजा क्षेत्रीको निर्देशनमा रहेको छ ।
प्रश्न ः तपाई जस्तो सुन्दर र आकर्षक मोडलका लागि त चलचित्रका लागि पनि प्रस्तावहरु त आए होलान नी ?
उत्तर ः छ । तिहारको समाप्ति सँगै छायाँकन गरिने भएको छ । चलचित्रको नाम चाहिँ “डन्ट ब्रेक माइ हर्ट” भनिएको छ । यसको निर्माता कुमार श्रेष्ठ हुन र निर्देशक दिनेश पौडेल रहने छन । अन्य कलाकारहरुमा आकाश आर्चाय र माधव केसी भनेर जानकारी पाएकी छु ।
प्रश्न ः ग्ल्यामर्सको क्षेत्रमा टिक्न त नेपालमा धेरै पापड बेल्न पो पर्छ भन्छन ?
उत्तर ः मेरो योग्यता, क्षमता र प्रतिभाको सराहना गरेर कामको लागि अफर गर्दछन भने म तयार छु । तर अन्य नानाभाँतीका तिकड्म र स्क्याण्डल मच्चाउँदै यस क्षेत्रमा टिक्ने बिचार पट्टक्कै छैन । कामको लागि काम गर्ने हो । काम इमान्दारी पूर्वक गरिन्छ । काम अनुसारको दाम लिने हो । अन्य कुराहरुमा अल्झेर यो दुनियाँमा रहिरहनु भनेको आफ्नो पनि बद्नाम र नयाँ पुस्ताहरुलाई पनि यस क्षेत्रमा आउन निरुत्साहित गर्नु हुनेछ । अनावश्यक झैं झमेलामा फसेर काम गर्नु नपर्ला भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
प्रश्न ः आफुलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा नाम छ जस्तो लाग्छ की बद्नाम छ जस्तो लाग्छ ?
उत्तर ः नाम, दाम दुबै छ भनेर नै म यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुँ । नत्र जीवन जीउने बाटोहरु धेरै नै छन् । मलाई अरुको बद्नामको विषयमा भन्दा पनि आफु चाहिँ त्यसबाट कसरी जोगिने भन्नेमा सचेत छु । जाहाँ राम्रा कुराहरु छन्, त्यहाँ नराम्रा कुराहरु पनि भेटिन्छन् । तर आफ्नो बाटो कुन हो भनेर खोज्ने र रोज्ने जिम्मेवारी आफ्नो हो ।
प्रश्न ः अन्तिममा केही भन्न चाहनु हुन्छ ?
उत्तर ः म पनि यहाँहरुलाई भरपुर मनोरन्जन दिन सक्छु भन्ने अभिलाषाका साथमा ग्ल्यामर्सको दुनियाँमा प्रवेश गरेको छु । मेरो कामको राम्रो र नराम्रो दुबै पक्षहरुको बारेमा यहाँहरुबाट जानकारी पाउन सके राम्रोलाई अझै राम्रो बनाउने र नराम्रोलाई सुधार्ने अवसर प्राप्त गर्दथे । म नेपाली कला, संस्कृतिका पारखीहरुबाट सुझाव, सल्लाहको ब्यग्र प्रतिक्षामा रहिरहने छु । धन्यवाद ।
११ बर्षपछि एकसाथ देखिदै करिना र अभिषेक ।